Yakha Izikweletu Zakho Zobumbano - Ukuqonda Izinga Lezamabhizinisi
Izinhlaka ezintathu zokubika ezikweletini zamabhizinisi ayisisekelo, uDun noBradstreet, i-Experian ne-Equifax, sezihloliwe. Manje sizodingida ukuthi lezi zinhlangano ezibandakanya ukubika izikweletu zilinganisela kanjani isikweletu sakho sebhizinisi nokuthi lokho kusho ukuthini kuwe. Umhlinzeki ngamunye webhizinisi lesikweletu wenza ukuhlolwa kwabo kwezibalo ukuthola ukuthi kufanelekile kwenhlangano yebhizinisi ukuthola isikweletu. Isikolo ngasinye noma ukukalwa ngakunye kufanekisela amathuba ebhizinisi elikhokhela isikweletu kanye nesikhathi sokukhokha. Isikweletu ngasinye sebhizinisi nokukalwa kususelwa ekusebenzeni kwezikweletu kwebhizinisi okuqoqiwe okuqongelelwayo kusuka kwabakweletayo asebevele bebolekile noma bewenezelwa imali.
UDun noBradstreet Paydex Score
Kuyini Isikolo se-Paydex? Kuyisistimu yokushaya amagoli elula ukusuka ku-0 kuye kwi-100, efana nesikolo se-FICO. Imvamisa i-75 Paydex noma ngaphezulu kuzoba lapho ibhizinisi lakho lingasungula khona isikweletu ngaphandle kokusebenzisa isiqinisekiso somuntu siqu nangemigomo evumayo. Leli banga likhokha kubanikezeli kanye nabathengisi ngokusebenza ngesikhathi esifanele kwemigomo yesikweletu.
I-D&B Isikweletu se-eValuator Plus Sample Umbiko
I-Reportan Intelliscore Report
I-Experian ingelinye lama-ejensi amakhulu wokubika isikweletu ezweni. Ukuhlinzeka ngezikolo ezikweletwayo ngokusebenzisa izindlela zabo zokuphathelene ezibizwa nge- “Intelliscore” ukubika. Inhlangano yakhe yi-Intelliscore yebhizinisi eyisampula umbiko kusuka ku-Experian
Izinga Lengozi Yesikweletu Esincane Ye-Equifax
I-Equifax ngomunye umhlinzeki wamaphuzu wesikweletu omkhulu ophathelene nenani lezinombolo elibonisa ukuthathwa kwenhlangano kwebhizinisi isikweletu. Iba ngcono isikolo, kube nengozi encane kulowo obolekayo.
Isampula Yombiko Wamabhizinisi Amancane
Okudingayo Ukwakha Izikweletu Zebhizinisi Ngokwakho
Yenza yonke inkokhelo yakho edingekayo kusenesikhathi, noma okungenani, ngesikhathi. Kwi-D&B, kuzofanele ubonise okungenani abakweletisi be-5 ababika ngezinkokhelo ezifika ngesikhathi ukuze uthole i-Paydex ye-75 noma okungcono. Lezi ezinye ezimbili, uzodinga ukuba nemalimboleko yasebhange bese amakhadi ambalwa akhishwe ebhizinisini elinomlando wokukhokha owanelisayo wesilinganiso esiphakeme.
>> Qhubekela Kulesinyathelo Esilandelayo ekwakheni Ikhredithi Yezimali - Isimo Sakho Sezezimali zebhizinisi >>